गाईको दूध खानु ठीक कि भैंसीको ? जान्नुहोस् कुन दूध खानु फाइदाजनक मानिन्छ::आर एम खबर
गाईको दूध खानु ठीक कि भैंसीको ? जान्नुहोस् कुन दूध खानु फाइदाजनक मानिन्छ
हाम्रो दैनिक जीवनमा अति नै उपयोगी चिज दूध हो । दूधको जति धार्मिक महत्व छ त्यति नै स्वास्थ्यको लागी उति नै महत्व रहेको छ । दूध भान्सामा प्रयोग हुनेदेखि लिएर मिठाइका बनाउनसम्म प्रयोग गरिन्छ ।अझ दूध बच्चाको लागी अति उपयोगी मानिन्छ ।
दूधमा ८५ प्रतिशत पानी हुन्छ र बाँकी भागमा ठोस तत्त्व वा खनिज तथा बोसो हुन्छ । दूधमा प्रोटिन, क्याल्सियम र राइबोफ्लेविन ९भिटामिन बी२० पाइने गरिन्छ । त्यति मात्र नभइ दूधमा भिटामिन ए, डी र ई सहित फस्फोरस, म्याग्नेसियम, आयोडीन तथा धेरै खनिज र बोसो तथा ऊर्जा पनि हुन्छ ।
गाईको दूध खानु ठीक कि भैंसीको ? भैंसीको दूधमा प्रति ग्राम ०।६५ मिली ग्राम बोसो हुन्छ भने गाईको दूधमा प्रति ग्राम ३।१४ मिली ग्राम बोसो हुन्छ । भैंसीको दूधमा गाईको दूधको तुलनामा ९२ प्रतिशत क्याल्सियम, ३७ प्रतिशत फलाम र ११८ प्रतिशत अधिक फस्फोरस हुन्छ ।त्यसैले गाईको दूध भन्दा उत्तम भैंसीको दूध मानिन्छ ।
भैंसीको दूधमा कम बोसो र मिनरल बढी मात्रामा हुन्छ ।त्यसैगरी आयुर्वेदको अनुसार गाईको ताजा दूधलाई नै उत्तम मानिन्छ । बत्रा हस्पिटल एन्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टरको आयुर्वेदको विभागाध्यक्ष डा। मेहर सिंहको अनुसार भने गाईको दूध मस्तिष्कको लागि धेरै उत्तम मानिन्छ ।